Senator ka tirsan aqalka sare oo xafiis uu ugu adeegayo bulshada ka furay Cadaado Daawo Sawirro!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Senator ka tirsan aqalka sare oo xafiis uu ugu adeegayo bulshada ka furay Cadaado Daawo Sawirro!!
Senator ka tirsan aqalka sare oo xafiis uu ugu adeegayo bulshada ka furay Cadaado Daawo Sawirro!!
Abshir Axmed oo ah nin dhalinyaro ah ayaa ka mid ah senatarada sugaya in si rasmi ah loo dhaariyo kuwaasoo gaaraya 54 xubnood.
Furista xafiiskan ayaa imanaya xilli siyaasiyiinta Soomaaliyeed lagu eedeeyo inaysan wax xiriir ah la lahayn deegaanada ay wakiilada ka yihiin, iyagoo inta badan jooga caasimada dalka ee Muqdisho.
Hadii aad jecleysatay in xafiiskaas ku taageerto dhaqaalo iyo maskax waxaa kala xariiri kartaan teelka hoos ka muuqda.
Previous PostDad badan ee ku dhinteen oo ka kacay Goob Xaflad Muusik ah ay ka socotay Daawo Sawirro!! Next PostMadaxtooyada Soomaaliya oo ka jawaabtay hadalkii Cumar Cabdirashiid ee ahaa in Jubland putland, saaxiibadooda Itoobiya iyo Imaaraadka ay sameeystaan is badal hogaamiye siyaasadeed!!